Chii chinonzi AUR uye maitiro ekuigonesa muArch Linux uye zvigadzirwa | Kubva kuLinux
Chii chinonzi AUR uye maitiro ekuigonesa pane Arch Linux uye zvigadzirwa
Darkcrizt | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Pano pane blog nguva zhinji isu tanga tichitaura nezvekuiswa kwemamwe maturusi kana kunyorera zvakajairika muLinux, uyen iyo yandinonyanya kuyedza kuisa iyo inonyanya kufarirwa kugovera.
Pakati pavo ini ndinowanzo sanganisira Arch Linux uye zvigadzirwa zvayo. Kunyangwe ndaizoda kutaura nezve mumwe chete kunyanya, handikwanise kusiira vamwe parutivi, nekuti pakupedzisira vane hwaro hwakafanana.
Mune mazhinji ezvinyorwa izvi ivo kazhinji vanokurudzira kuisa kubva kuAUR uye kushandisa "AUR mubatsiri" kuzviita.
Kune avo Vaverengi vasingazive izvi, isu tichataura zvishoma nezve izvi nhasi.
Avo vari Vashandisi veLinux vane imwe nguva yekushandisa, vanofanirwa kuona izwi rekuti "repository" ino ingori software sosi.
Ichi zvinoreva kuti inzvimbo yekuchengetera inogona kuwanikwa mapakeji esoftware uye gadza pakombuta.
Nzvimbo yekuchengetera (inonziwo repos) inogona kuiswa mumhando mbiri: yepamutemo repositi uye repositi inochengetwa nevanhu vechitatu (mushandisi) chero mushandisi.
Zviripachena, iwo epamutemo repo masosi anouya pre-akaisirwa neArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuArch Linux.
Kune rimwe divi, kune Archiving Archiving Repository (AUR), Chii nzvimbo inotungamirwa nenharaunda yeArch Linux uye zvigadzirwa zvayo.
Kunge repamutemo repamutemo, iwo zvakare ane tsananguro dzemapakeji (PKGBUILD) ayo anogona kuverengerwa kubva kunobva ne makepkg ndokuzoiswa kuburikidza pacman AUR iripo yekugovana mapakeji nyowani kubva munharaunda.
1 Kuisa nekubvisa maapplication
1.1 Kugonesa AUR pane Arch Linux uye zvigadzirwa
Kuisa nekubvisa maapplication
Kuisa mashandisiro pane chero Arch Linux yakavakirwa kana yakatorwa sisitimu iwe unogona "Wedzera / Bvisa software" izvi zvinowanzoitwa kubva kumagumo nerubatsiro rwePacman.
Kunyangwe mune mamwe madesktop mamiriro, ivo anowanzo sanganisira chishandiso chekukubatsira iwe kuisa kana kusunungura maapplication.
Mune ino kesi tinogona zvakare kushandisa chishandiso chinozivikanwa chinonzi Octopi, inova graphical interface yePacman iyo inotibvumidzawo kusangana neAUR.
Kugonesa AUR pane Arch Linux uye zvigadzirwa
Kugona kuwedzera AUR rutsigiro kune chero Arch Linux inotorwa sisitimu mavanogona kuwana mukana kuzviuru zvezvikumbiro zvakagadzirwa uye zvinochengetwa nenharaunda.
Tichifunga nezve kuti maapplication aya anotungamirwa munharaunda, kwete ese maapplication anogara achigadziriswa.
Muchokwadi, kune akati wandei mafomu asina kuvandudzwa kweanopfuura makore mashanu. Ungangoda kugara kure nemaapplication akadaro nekuti anogona kukonzera kusagadzikana kwesystem uye muzviitiko zvakaipisisa zvinogona zvakare kuratidza njodzi dzekuchengetedza.
Kuti uwane izvi, dTinofanira kuwedzera mimwe mitsara kune yedu pacman.conf faira, iyo yatinozowedzera inotevera mitsara kumagumo efaira.
Ingovhura terminal uye gadziridza nano kana yako yaunofarira mavara edhitaina:
Y isu tinowedzera kumagumo:
Sevha = http://repo.archlinux.fr/$arch
Zvino waita izvi, isu tinofanirwa kuita unotevera kuraira, Kuti uwiriranise dhatabhesi uye iro rakawedzerwa repositi nehurongwa:
Waita izvi izvozvi isu tinofanirwa kuisa mubatsiri kuti tibatsire kuisa mashandisiro ari mukati meAUR, kune izvi unogona kutarisa chinyorwa chinotevera kwandinokurudzira imwe.
Ivo vanogona zvakare kusarudza kungoshandisa software maneja uye dzivisa kushandisa tambo yekuraira, sezvandataura Octopi, inova yakanaka kwazvo package yekushandisa yeArch Linux uye zvigadzirwa.
Kunyange zvakadaro Ini pachangu ndaikurudzira kuti iwe ushandise iyo terminal zvakanyanya sezvinobvira, nekuti nenzira iyi ivo vanozotanga kujaira iwo mirairo uye vodzidza kuisa, kugadzirisa, kugadzirisa uye kugadzirisa yavo system.
Kunyangwe kudzikisira, bvisa iyo graphical nharaunda, uyezve kuvaka iyo system uye nezvimwe.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru zvandinofarira pamusoro peArch Linux nekuti kunyangwe ukarasikirwa nemamiriro ekunze, kana iwe ukamisa kubva pakutanga, iwe uchangoziva zvekuita kuti uwanezve.
Izvo, kusiyana nemamwe masisitimu, vashandisi vanopenga uye mazhinji acho anosarudza kudzoreredza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Chii chinonzi AUR uye maitiro ekuigonesa pane Arch Linux uye zvigadzirwa
Mukomana anofungidzira kuti iwe unoziva zvakafanana nezvaanoziva, saka unomuverenga, uye unobuda sehove seizvo zvawakapinda.
Rongedza iyo faira, inoti, archlinuxfr iri mumabhureki? Ndichachiwana sezita remusoro here? Ini ndinofanira kubvisa iyo # chiratidzo? Ino inotevera tambo (Server = http://repo.archlinux.fr/$archndinoiisa kupi? Nenzvimbo? panguva ino unodemba kutambisa nguva
IssueHunt: chikuva chitsva chemari yakavhurwa sosi yemari
Fedora 29 Beta ichaburitswa svondo rinouya